January 2017 – Dhammadīpa
Posted on 21 Jan 2017 by Ashin Sopāka
languish like old herons in the pond without fish.
like worn out arrows (shot from)abow. Dhp 155-156
aladdhā yobbane dhanaṁ;
(သူမိုက်တို့သည်) အရွယ်ရှိခိုက် မြတ်သောအကျင့်ကို မကျင့်လိုက်မိ၊ ဥစ္စာကိုလည်း မရလိုက်မိသောကြောင့် ငါးကုန်ခန်းသော ညွန်အိုင်၌ အတောင်ကျွတ်သော ကြိုးကြာအိုတို့ကဲ့သို့ (အရွယ်လွန်သောအခါ) ကြံမှိုင်၍သာ နေကြရကုန်၏။
(သူမိုက်တို့သည်) အရွယ်ရှိခိုက် မြတ်သောအကျင့်ကို မကျင့်လိုက်မိ၊ ဥစ္စာကိုလည်း မရလိုက်မိသောကြောင့် လေးမှလွတ်ပြီးနောက် အရှိန်ကုန်သော မြားတို့ကဲ့သို့ ရှေးဖြစ်ဟောင်း (သုခ) တို့ကို ညည်းတွားအောက်မေ့၍သာ နေကြရကုန်၏။
Lúc trẻ, không phạm hạnh,
Javan Pond Heron ©Ashin Sopāka 2016
Posted in Dhamma	| Tagged aging, dhamma, getting old, impermanence
Posted on 14 Jan 2017 by Ashin Sopāka
“Just as, bhikkhus, among fragrant flowers, jasmine is declared to be their chief, so too, when the perception of impermanence is developed, it eliminates all sensual lust, it eliminates all lust for existence, it eliminates all ignorance, it uproots all conceit ‘I am.’” – SN 22.102
“Seyyathāpi, bhikkhave, ye keci pupphagandhā, vassikaṁ tesaṁ aggamakkhāyati; evameva kho, bhikkhave, aniccasaññā bhāvitā bahulīkatā sabbaṁ kāmarāgaṁ pariyādiyati, sabbaṁ rūparāgaṁ pariyādiyati, sabbaṁ bhavarāgaṁ pariyādiyati, sabbaṁ avijjaṁ pariyādiyati, sabbaṁ asmimānaṁ samūhanati.”
ရဟန်းတို့ ဥပမာသော်ကား အပွင့်နံ့သာအားလုံးတို့တွင် မြတ်လေးပန်းကို အမြတ်ဆုံးဟု ဆိုရ၏။ ရဟန်းတို့ ဤအတူပင် မမြဲဟူသော အမှတ် ‘အနိစ္စသညာ’ကိုပွားများအပ် လေ့လာအပ်သော် ကာမဂုဏ်တို့၌ စွဲမက်မှု’ရာဂ’ အားလုံးကို ကုန်စေနိုင်၏၊ ရုပ်၌ စွဲမက်မှု ‘ရူပရာဂ’ အားလုံးကို ကုန်စေနိုင်၏၊ ဘဝ၌ စွဲမက်မှု ‘ဘဝရာဂ’ အားလုံးကို ကုန်စေနိုင်၏၊ အဝိဇ္ဇာအားလုံးကို ကုန်စေနိုင်၏၊ ငါဟူသော မာနအားလုံးကို နုတ်ပယ်နိုင်၏။
Ví như, này các Tỷ-kheo, phàm có những hoa hương gì, hương vassika là tối thượng hơn những hương ấy. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, do tu tập, làm cho sung mãn vô thường tưởng, tất cả dục tham được đoạn tận, tất cả sắc tham được đoạn tận, tất cả hữu tham được đoạn tận, tất cả vô minh được đoạn tận, tất cả ngã mạn được tận trừ.
Some Sorta Flower ©Ashin Sopāka 2016
Youth and Idleness
Posted on7Jan 2017 by Ashin Sopāka
withamind full of vain thoughts—
such an indolent man does not find the path to wisdom.
Yuvā balī ālasiyaṁ upeto;
ပျိုမျစ်နုထွား ခွန်အားနှင့် ပြည့်စုံပါသော်လည်း ထကြွသင့်သောအခါ၌ ထကြွမှု လုံ့လမရှိဘဲ ပျင်းရိထိုင်းမှိုင်းလျက် စိတ်အကြံ ‘ဝိတက်’ များ၍ အလွန် ပျင်းရိသူသည် ပညာဖြင့်သာ ရယူနိုင်သော အရိယမဂ်ကို မရနိုင်။
Bullfrog toddler ©Ashin Sopāka 2016
Posted in Dhamma	| Tagged dhamma, idleness, paññā, youth